Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Hohamafisina ny paikady -
AccueilSongandinaAdy amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Hohamafisina ny paikady
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Hohamafisina ny paikady
Nikaondoha nanomboka omaly teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika, ahafahana mijery sy manapaka ny fomba entina hanamafisana ny paikady hiadiana amin’izany. Minisitera miisa dimy izay ahitana ny minisiteran’ny Atitany, ny Fitsarana, ny Fiarovam-pirenena, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ary ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka no miara-misalahy amin’io atrik’asa izay haharitra roa andro io. Nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Olivier Mahafaly Solonandrasana, izay nitarika ny fivoriana fa tanjona aorian’izany ny tsy maintsy hisian’ny paikady hapetraka isaka ny distrika sy ny kaominina ahafahana miady amin’izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay.
“Tsy resa-be intsony fa tsy maintsy hahitana vokatra haingana. Hojerena ny fomba handrindran’ireo minisitera ny fomba fiasa eny ifotony izay azo antoka fa tsy maintsy hisy vokatra tsara, ary mila hatao tsapan’ny vahoaka fa misy fanjakana miaro izy ireo“, hoy ny nambarany. Samy horesahina sy hitadiavam-bahaolana maharitra ao anatin’ity fikaonandoha izay mbola hitohy anio ity moa na ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàn-dehibe, na ny any ambanivohitra. Tafiditra ao anatin’izany ny resaka “cybercriminalité”, ny resaka fakana an-keriny izay maha-lasibatra ireo mpanam-bola sy mpandraharaha eto amin’ny firenena, ny fandrobana banky izay nandrenesam-peo tao ho ao raha tsy hilaza afa-tsy ilay niseho tany Mahajanga vao tsy ela akory izay. Hohamafisina ihany koa ny paikady enti-miady amin’ny asan-dahalo sy ny halatr’omby any amin’ireo faritra maro izay mbola hanjakan’izany. “Tsy maintsy miatrika ireny ny fitondram-panjakana, indrindra amin’izao taom-pifidianana izao mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena. Efa nisy ny fandraisana andraikitra hatramin’izay saingy hohamafisina izany ”, hoy ihany ny voalazan’ity praiminisitra lehiben’ny governemanta ity.
Hisy ny fanaraha-maso
Araka ny nambaran’ity tompon’andraikitra lehiben’ny governemanta ity ihany dia hisy ny fanaraha-maso amin’ny fanatanterahana ireo paikady hapetraka, ka handraisana fepetra avy hatrany ireo izay tsy nahatontosa ny asa. “Vokatra azo tsapain-tanana no tanjona”, hoy ny fanamafisany. Tsy ny resaka fitoniana ihany moa no tanjona ao anatin’ity fanamafisana ny paikady entina miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ity, fa isan’ny imasoana ao anatin’izany ihany koa ny fampandrosoana maharitra ny firenena izay tafiditra ao anatin’ny politikan’ny fitondram-panjakana sy ny vina fisandratana 2030. Marihina fa fivoriana efa nomanina hatry ny ela ity atrik’asa ity, ary nohamafisina tamin’ny “team building” tany Mantasoa, izay nanapahana hevitra fa misy laharam-pahamehana maromaro tsy maintsy hojeren’ny governemanta hahafahana mampandroso an’i Madagasikara, dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran’ny vidim-piainana, ary ny mahakasika ny solika.
Fotodrafitrasa miisa telo no natolotry ny fitondram-panjakana ho an’ny mponina eny Ivato, ary notanterahina omaly ny fitokanana azy ireo. Tao ny toeram-pitsaboana CSB II Ambodirano misy rihana iray, izay ahitana fandriana efatra sy fitaovana arifomba ...Tohiny